နဂိုကတညျးက ရျောနယျဒိုကို အထငျမကွီးခဲ့တဲ့ ဇလာတနျ အခုရော ဘယျလိုသဘောထားနလေဲ? |
နဂိုကတညျးက ရျောနယျဒိုကို အထငျမကွီးခဲ့တဲ့ ဇလာတနျ အခုရော ဘယျလိုသဘောထားနလေဲ?
September 9, 2021 author one Articles 0
ပျေါတူဂီကွယျပှငျ့စီရျောနယျဒိုဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ ၂၀၀၃ခုနှဈကနေ ၂၀၀၉ခုနှဈအထိ ပထမတဈကွိမျကစားခဲ့တာဖွဈပွီး ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးထံ ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စီရျောနယျဒိုအနနေဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလအတှငျး ပွညျတှငျးအမှတျပေးဖလား ၃ကွိမျအပွငျ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကိုပါ ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျဒိုဟာ အသကျ၃၆နှဈအရှယျရှိလာခြိနျမှာ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကနေ ယူနိုကျတကျအသငျးကို တဈကြော့ပွနျရောကျရှိလာခဲ့တာဖွဈပွီး အသငျးကိုအောငျမွငျမှုတှပွေနျလညျရယူပေးဖို့ စိတျအားထကျသနျနတောဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ရျောနယျဒိုနဲ့ ပတျသကျလာရငျတော့ အိုးထရကျဖို့ဒျက ပထမအကွိမျအောငျပှဲခံနိုငျမှုမှာ မထောကျခံပေးနိုငျတဲ့သူတဈဦးရှိနပွေီး
အဲဒီသူကတော့ သူ့ရဲ့စီနီယာပွိုငျဘကျကောငျးကွီး ဇလာတနျ အီဘရာဟီမိုဗဈချြပါ။ သူကတော့ ရျောနယျဒိုရဲ့ ယူနိုကျတကျဂြာစီကို ဝတျဆငျခဲ့ခြိနျက ခွစှေမျးတှကေို အထငျမကွီးလှဘူးလို့ သိရှိရပါတယျ။
၂၀၁၅ ခုနှဈက BBC နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ မိုဗဈချြက ရျောနယျဒိုရဲ့လုပျဆောငျမှုတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုအမြားစုဟာ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျရဲ့ ကြေးဇူးကွောငျ့သာဖွဈပွီး
ဒီထကျပိုပွီး ဂုဏျပွုထိုကျတဲ့သူက ကှငျးထဲမှာ ရျောနယျဒိုတောကျပနိုငျဖို့အတှကျ သူ့ကိုယျသူ အနဈနာခံပွီး ဝနျးရံပေးဆပျခဲ့တဲ့ ဝိနျးရှနျးနီသာဖွဈတယျလို့ ပွောကွားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အီဘရာဟီမိုဗဈချြက ” တကယျ့ ထိပျတနျး ကစားသမားတှကေ သူတို့ရဲ့အခိုကျအတနျ့တှကေို ၁နှဈကနေ၃နှဈအတှငျး ထိနျးထားတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ရှနျးနီလိုမြိုး ၅နှဈ၊ ၁၀နှဈလောကျထိနျးထားဖို့ဆိုတာ မလှယျကူပါဘူး။
” ရှနျးနီက ရျောနယျဒိုနဲ့တှဲကစားခဲ့တုနျးက အောကျခွသေိမျးကအစ မတှကျကပျဘူး။
အကုနျလိုကျလုပျပေးခဲ့သူပါ။ ဒါပမေယျ့ ရှနျးနီက သူနဲ့ထိုကျတနျတဲ့ အသိအမှတျပွုခံရတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကိုတော့ သိပျမြားမြားစားစား မရခဲ့ရှာပါဘူး။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ရျောနယျဒိုကပဲ ရလာတဲ့ ဂိုးအခှငျ့အရေးတိုငျးကို ဒိုငျခံသှငျးယူနနေိုငျခဲ့လို့ပါ။” လို့ ပွောဆိုသှားခဲ့တာပါ။
နဂိုကတည်းက ရော်နယ်ဒိုကို အထင်မကြီးခဲ့တဲ့ ဇလာတန် အခုရော ဘယ်လိုသဘောထားနေလဲ
ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့်စီရော်နယ်ဒိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ၂၀၀၃ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၉ခုနှစ်အထိ ပထမတစ်ကြိမ်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းအမှတ်ပေးဖလား ၃ကြိမ်အပြင် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုပါ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ အသက်၃၆နှစ်အရွယ်ရှိလာချိန်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကနေ ယူနိုက်တက်အသင်းကို တစ်ကျော့ပြန်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်ရယူပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရော်နယ်ဒိုနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်က ပထမအကြိမ်အောင်ပွဲခံနိုင်မှုမှာ မထောက်ခံပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ဦးရှိနေပြီး အဲဒီသူကတော့ သူ့ရဲ့စီနီယာပြိုင်ဘက်ကောင်းကြီး ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ်ခ်ျပါ။ သူကတော့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ယူနိုက်တက်ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ချိန်က ခြေစွမ်းတွေကို အထင်မကြီးလှဘူးလို့ သိရှိရပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်က BBC နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မိုဗစ်ခ်ျက ရော်နယ်ဒိုရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုအများစုဟာ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်သာဖြစ်ပြီး ဒီထက်ပိုပြီး ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့သူက ကွင်းထဲမှာ ရော်နယ်ဒိုတောက်ပနိုင်ဖို့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ အနစ်နာခံပြီး ဝန်းရံပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ဝိန်းရွန်းနီသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အီဘရာဟီမိုဗစ်ခ်ျက ” တကယ့် ထိပ်တန်း ကစားသမားတွေက သူတို့ရဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို ၁နှစ်ကနေ၃နှစ်အတွင်း ထိန်းထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွန်းနီလိုမျိုး ၅နှစ်၊ ၁၀နှစ်လောက်ထိန်းထားဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ အသင်းကြီးအတွက်ကစားပေးရတာ နေ့တိုင်းဖိအားတွေနဲ့ပါ”
” ရွန်းနီက ရော်နယ်ဒိုနဲ့တွဲကစားခဲ့တုန်းက အောက်ခြေသိမ်းကအစ မတွက်ကပ်ဘူး။ အကုန်လိုက်လုပ်ပေးခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ရွန်းနီက သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော့ သိပ်များများစားစား မရခဲ့ရှာပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရော်နယ်ဒိုကပဲ ရလာတဲ့ ဂိုးအခွင့်အရေးတိုင်းကို ဒိုင်ခံသွင်းယူနေနိုင်ခဲ့လို့ပါ။” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။
ရှနျနီ၊ အီတူး၊ တောရကျဈတို့ထကျ ဟကျထရဈအကွိမျပိုမြားတဲ့ ဟာလနျး တဈပှဲတဈဂိုးနှုနျးသာသှငျးနိုငျလို့ မကမြေနပျဖွဈ
ကိုပါအမရေိကအောငျပှဲကွောငျ့ သူ့သားတှေ ပြျောရှငျနတေဲ့အပျေါ ရငျဖှငျ့လာတဲ့ မကျဆီ